1. ဘယ်လို Long ကဒါဟာအဆိုပါ CNC Angle လိုင်း Install လုပ်ဖို့ကိုယူပါသလား
ထက်နည်း5ရက်စက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်သင့်ရဲ့စက်ရုံအတွက် marking နှင့်ညှပ်စက်ကို install နိုင်ပါတယ်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အဆိုပါနေထွက် CNC ANGLE လာကြတယ်။ စက်တပ်ဆင်ရန်ရိုးရှင်းနှင့်အလုပ်၏အများဆုံးမတိုင်မီဖောက်သည်ရဲ့စက်ရုံရောက်ရှိလာသောန်ဆောင်မှုနည်းပညာရှင်ဖို့ဖောက်သည်များကပြုမိသည်။
တစ်ဦး။ မတိုင်မီကသင့်ရဲ့စက်ကို install ရန်သင့်အားအောက်ပါထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ခ။ ပြားချပ်ချပ်နဲ့အဆင့်ကိုကွန်ကရစ် pad ပါ 100mm သို့မဟုတ်4"အထူ (သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ) ။
က c ။ 0.8 MPa (သို့မဟုတ် 90-125 psi) မှာအပူပိုင်းဆိုင်လေထု။
ဃ။ စက်ကို run ဖို့လျှပ်စစ်ပါဝါ။ စက် 3-အဆင့် 380V power supply လိုအပ်သည်။ သငျသညျ 380V အာဏာရှိသည်မထားဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့ထောင့်မျဉ်းကြောင်းများကလိုအပ်သောဇာတိ 480V မှ 208/22, 380, 400 နှင့် 560V အပါအဝင်မည်သည့် 3-အဆင့်အရင်းအမြစ်ဗို့အားပြောင်းတဲ့ Transformer အားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
စက်စံကုန်တင်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများကရောက်ရှိလာသည်။ သငျသညျ, ထို client ကို, အသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထရပ်ကားကနေနေထွက်စက် offloading နှင့်သူ၏စက်ရုံအတွက်စက်တက် setting တာဝန်ရှိသည်။
သငျသညျအခြေခံအုတ်မြစ်အလုပ်ပြီးစီးခဲ့ပြီး, သင် faxed ရှိသည်ဟုသို့မဟုတ်နေထွက်ဖို့တပ်ဆင်သင့်ဖြစ်မှုပို့ကြောင်းနေထွက်အကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, ထို့နောက်နေထွက်ဝန်ဆောင်မှုနည်းပညာရှင်သင့်ရဲ့စက်ရုံသွားရောက်နှင့်သင့်စက်၏နောက်ဆုံး setup ကိုနှင့်စံကိုက်ညှိပြုပါ, ပြီးတော့အချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ် သင့်ရဲ့အော်ပရေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရှင်းသောသေးနှံ့နှံ့စပ်စပ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုတဆင့်သူတို့ကိုယူပြီးအတူ။
တစ်ဦး။ စက် setup ကိုများနှင့်ညှိနှိုင်းမှု။
က c ။ တွေ့ရှိချက်များနှင့်ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းအပြစ်တင်။
ဃ။ စိတျအပိုငျးမြား၏ programming ။
f ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာကြတယ်နှင့်သေကိုပြောင်းလဲနည်း။
ဆ။ သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်း bits သည်ထက်မြက်ဖို့ကိုဘယ်လို။
အဆိုပါနေထွက် CNC စက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံ PLC module တွေကိုအသုံးပြုသည်, ဒါကြောင့်စက် software ကိုသို့အခြို့သောတန်ဖိုးများကို input ကိုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်နှင့် PLC အားလုံးကို parameters တွေကိုပေးပို့ပါ။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သော TEKLA, X-သံမဏိ, LIPINGYI, သို့မဟုတ်သင့် AutoCAD ရေးဆွဲအဖြစ်အချို့သောခနျး software ကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်, ဤမျှကာလပတ်လုံးက txt format နဲ့ဖွင့်နိုင်ပါသည်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ကိုအလိုအလျောက်သင့်လျော်စက်ကိုဒေတာထဲသို့ဒေတာကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ CNC ပြား Drilling စက်, CNC H ကိုရောင်ခြည် Drilling စက်ကိုအလိုအလျောက် AutoCAD file တွေကိုဖတ်နိုင်ကြပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ installation ကိုနည်းပညာရှင်ကစက်မှာအော့ဖ်လိုင်းသည်သင်၏ရုံးခန်းထဲမှာနှစ်ဦးစလုံးသည်နေထွက်စက်တွေသို့အစိတ်အပိုင်းများကို program မှဘယ်လောက်လွယ်ကူသောသင်ပြပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့သည်လည်းလုံးဝအော်ပရေတာအမှားမဆိုဖြစ်နိုင်ခြေဖျက်သိမ်းရေးကိုတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်သို့ (ထို DSTV format ကိုထောက်ပံ့သော) CAD အသေးစိတ်ဖိုင်တွေတင်သွင်းဖို့ဘယ်လိုပြသပါလိမ့်မည်။
အသေးစိတ်ကိုနှင့်စျေးနှုန်းအဘို့ပဌနာကျေးဇူးပြုပြီး - ကျနော်တို့ကိုလည်းအော်ပရေတာသင်တန်းပူဇော်နိုင်နှင့်အသစ်အော်ပရေတာ (နှင့် Jinan, တရုတ်အတွက်နေထွက်စက်ရုံမှာရှိပြီးသားအော်ပရေတာများအတွက်မွမ်းမံသင်တန်းများအတွက်ဖြစ်ကြသည်။
နေထွက် CNC စက်များအတွက်နည်းပညာပိုင်းပံ့ပိုးမှု
အဆိုပါနေထွက် CNC ပြား Drilling machine တအခမဲ့နီးပါးဒုက္ခသောကအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအခြေခံစက်ဖြစ်ပါတယ်။ It uses best quality pump, linear guide and YASKAWA servo, MITSUBISHI PLC and all main parts are world famous brands. SUNRISE CNC handles all repairs and maintenance that cannot be undertaken by the customer.
နေထွက် CNC တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် site ပေါ်တွင်ဝန်ဆောင်မှုနည်းပညာရှင်ရှိသည်ဖို့ကြိုးပမ်း။ ငါတို့သည်လည်းအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဒေသများရှိများစွာကိုဖြန့်ဖြူး, အေးဂျင့်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များရှိသည်။
နေထွက်အခမဲ့အာမခံကာလအတွင်းအကောင်းဆုံး prompt ကိုဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်။ အာမခံတဘက်, သာဝန်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်များအတွက်အခကြေးငွေကောက်ခံ။
နေထွက်ချက်ချင်းဖြန့်ဝေဘို့သိုလှောင်မှုအတွက်အလွယ်တကူရရှိနိုင်သမျှသောအဓိကအားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများကိုစောင့်ရှောက်။ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုမော်ဒယ်အဆင့်မြှင့်လျှင်, ငါတို့သည်ဖောက်သည်အသစ်ကမော်ဒယ်ကိုပြောင်းကိုကူညီရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ Also we supply some critical and wearing parts drawings to our customers, who can outsource it in your local area. We will supply free service for customers who buy spare parts from our side directly. All urgently required spare parts will be delivered by air to our customers.
နေထွက် CNC CNC ထောင့်စက်, CNC ထောင့်လာကြတယ်စက်, CNC ထောင့်တူးဖော်စက်, machine.CNC Beam ကို Lines processing မျှော်စင်, CNC Angle လိုင်းများနှင့် CNC ပြား Drilling စက်, CNC အနားကွပ် Drilling & Mills စက်, CNC Tube စာရွက် Drilling ၏တရုတ်ထိပ်တန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ် စက်, Angle ထစ်စက်, CNC ပြားလာကြတယ်စက်။ တစ်ဦးတည်းအတိတ်3နှစ်အတွင်းကောင်းစွာ 300 CNC စက်တွေကျော်နေထွက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ။ SUNRISE CNC always take prompt response for all customers’feedback. If problems cannot be solved by calling and mail, we send engineers to customers’factory for site service without fail. Our Technical Support, Parts Supply and After Sales Service, are unparalleled in the industry.
4. သင့်စက်ဒါမှမဟုတ်အခြားထုတ်ကုန်များ Customize လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်?
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာ CNC လာကြတယ်, Drilling, ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် angle အဘို့အစက် Sawing, ဟင်းပွဲများ, Beam, flat, Tube စာရွက်များ, အနားကွပ်အထူးသူတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ခိုင်မာတဲ့ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ရှိသည်, ဒါကြောင့်မည်သည့်သမားရိုးကျထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
ဒါဟာကြီးမားတဲ့စက်များအတွက်ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့စျေးသက်သက်သာသာဖွင့်နေသောကြောင့်အများအားဖြင့်ငါတို့သည် Seaways ယူပါ။ တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာရထားလမ်းအားဖြင့်စက်ကယ်နှုတ်တော်မူ။ သို့သော်အရေးပေါ်လိုအပ်သောအပိုပစ္စည်းများအတွက်ကျွန်တော်ဝေဟင် express ကိုကမကယ်မလွှတ်။
နေထွက်ကော်ပိုရေးရှင်း ISO9001 လွန်နေသည်: နှစ်ပေါင်းများစွာ 2008 အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အလက်မှတ်။ နှင့်နေထွက်အဖြစ်ကောင်းစွာတင်ပို့မတိုင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ကိုယ်စား SGS စစ်ဆေးရေးလက်ခံခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် 30% T / T ကြိုတင်ငွေပေးချေမှု (ရေကြောင်းပြီးနောက်) B / L ၏မိတ္တူကိုဆန့်ကျင် 70% T / T ။ နေထွက်ကိုလည်းမျက်မှောက်မှာ 100% L / C ကိုလက်ခံပါ။